China Sodium Perchlorate ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | YANXA
Sodium perchlorate bụ inorganic onyinye na usoro chemical NaClO₄. Ọ bụ ihe na-acha ọcha dị ọcha, nke siri ike hygroscopic nke nwere ike ịgbanye na mmiri na mmanya. A na-ezutekarị ya dị ka monohydrate.
Sodium perchlorate bụ ihe dị ike oxidizer, ọ bụ ezie na ọ baghị uru na pyrotechnics dịka nnu potassium n'ihi hygroscopicity ya. Ọ ga - eji acid dị ike dị ka sulfuric acid meghachi omume iji mepụta acid perchloric.
Jiri: tumadi na-eji n'ichepụta ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe site na usoro mmebi abụọ.
Sodium perchlorate bụ ihe dị ike oxidizer. Ekwesiri idebe ya na ihe ndi ozo na ndi na-ebelata ike. N'adịghị ka chlorates, ngwakọta perchlorate na sọlfọ na-adịgide adịgide.
Ọ bụ moderately na-egbu egbu, dị ka na nnukwu ichekwa ya emetụtakarị ayodiin uptake n'ime thyroid gland.
NaClO4 kwesịrị ịchekwa ya na karama ejiri akara n'ihi na ọ bụ ntakịrị hygroscopic. Ekwesiri idobe ya site na vapors siri ike nke acid iji gbochie guzobe anhydrous perchloric acid, oku na ihe egwu. A ghaghi idebe ya na ihe ọ bụla na-enwu ọkụ.
Ekwesighi ka wụsara sodium perchlorate ma ọ bụ tụfuo ya na gburugburu ya. A ga-emerịrị ya na onye na-ebelata ihe na NaCl.
Sodium perchlorate nwere ike iji ígwè dara bibie ya n'okpuru ọkụ UV, na enweghị ikuku.
Nke gara aga: DDI (Dimeryl Diisocyanate)
Atomized Sphereical Magnesium Alloy Powder